XAALADA SHACABKII SHINIILE OO NOQOTAY “QAWDA MAQASHII WAXNA HAA U QABAN” | Deegaanka News
XAALADA SHACABKII SHINIILE OO NOQOTAY “QAWDA MAQASHII WAXNA HAA U QABAN”
Sida aan wada ogsoonahay waxaa mudooyinkan danbe ka jiray gobalka Siti ee DDSI abaaro ba`an oo ay ku hoobteen dad iyo duunyaba laga soo bilaa bishii Nahase 2007. Gobalka siti ayaan ka duwanayn sida uu u badanyahay shacabka ku dhaqan deegaanka soomaalida itoobiya taas oo ah inay yihiin bulsho xoolo dhaqata nolashooduna ay ku tiirsantahay xoolaha. Hadaba abaartan ayaa shacabka gobalka ka fara bixisay ugu yaraan 70% xoolihii ay dhaqanayeen, taas oo sababtay in dad u badan caruur iyo waayeel ay u dhamaadeen nolol la`aan. Dawalada federalka ah ayaa isla bishii Nahase ku dhawaaqday xaalad masiibo ah inay ka jirto gobalka Siti iyo deegaanka Canfarta oo ay saamaysay abaarta isla markaana ugu yaboohday 600 million oo taageera ah. Halka xukuumadii deegaanka ka ariminaysay ay dhagaha ka furaysatay oo aysan haba-yaraatee wax taageero ah aysan siinin. Iyada oo aan ogsoonahay in budgetkii deegaanku ku dhamaaday jeebabka qawska reer ilay.
Hadaba kadib markii uu maqlay in maalinta arbacada ah uu aeriyada booqanayo raisal-wasaaraha wadanka mudane Hailemariam Dessalegn ayuu bilaabay ma xishoode ina ilay in uu magaalada jigjiga kasoo aruuriyo bustayaal iyo waxaan dhaamin isagoo is tusinaya raysal-wasaaraha wadanka.
Waxaa xusid mudan in ganacsatada udhalatay gobalka Siti iyo waliba ganacsato u dhalatay walaalaheen Dijibouti in ay iyagu iska aruriyeen aduun ka badan 20million oo birr oo ay dadkaas tabaalaysan ku gacan siinayaan. Dhaga ka furaysiga dhibataada shacabka ee dhamaanba deegaanka waa mid soo jirtay mudadii uu deegaanka ku amar-taaglaynayay Mr.ilay waxaadse moodaa mid uu gabalkiisi dhacay maanta.
Ma waxaa jira gobol aan gabal kii sii dhicin?miyayna ka dar nay nay nay?Jarar,Qoraxay,iyo Dool lo? Will asha siti joogaa waxay qiimo iyo qa darin yee la na yaan marka kuwa go bola da kale qiimo Lee yihiin.